Iibhotshi kumavili, okanye kunokuba i-roller sneakers - ngokwenene into eyingqayizivele kwaye ihlakaniphile. Kwizinto zakhe zokufumanisa, uluntu aluhlali luze luze lufikelele kwaye iimpumelelo zabadali be-brand ye-Heelys bubungqina obucacileyo bolu. Ngokwendlela, le nkampani leyo umsunguli wayo uRoger Adams kwisekude ka-2000 akaqulunanga nje kuphela, kodwa naye unelungelo lobunikazi.
Ukususela ngoko, uKhilis akazange aphele. Ngoko, ngoku kutshanje, kwiitrhebhe zokugcina izihlangu, izicathulo zobuciko zivele: eziqhelekileyo ekuboneni okokuqala izitebe kunye nezinebe, into eyona nto iyenzeka ngayo ngokukhawuleza ibe yiivenkile.
UHeelys usebenza njani kumavili?
Nantsi yonke into elula: kukho i-grooves encinci kwinqaba leengubo. Yilapho i-stub edibeneyo ifakwe khona, ngenxa yokuba izicathulo zijika zibe yinto ethile.
Ngendlela, ngoncedo lwalesi siqhelo unokuhamba ngokukhawuleza, ungadluli esikolweni okanye emsebenzini. Ukuba kubonakala ngathi ezi zihlangu zithandwa kuphela ngabantwana, ngoko simele sivume impazamo yethu. Kuyathakazelisa ukuba uKhilis wadala izicathulo zokuqhaqha iziqalo, abaxhamli, kunye nabangakwazi ukuphila ngaphandle komhla ogqithiseleyo nanamhlanje. Ngoku akumangalisi ukuba kutheni kukho abantu abadala phakathi kwabathengi abaqhelekileyo benqaku.
Iimpawu zeesanti ezinamavili ezithendeni
Le mveliso emangalisayo yenziwe ngeendlela eziliqela:
Kubantwana abane-4-9 iminyaka, i-sole of the shoe yenziwe ngamanqaku angabinxiba. Kwaye oku kuphakamisa ukuba, kungakhathaliseki ukuba unomntwana kangakanani, izicathulo ezingavamile ziya kuhlala zingaphaya kwexesha elilodwa.
Iimodeli ngevili elincinci elithile - kulabo abafuna ukusebenzisa ngezicathulo njengezihlangu eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba kunqweneleka, inokusetyenziswa njengendlela yokuthutha.
Iimveliso eziphambili kwi-classic style (grindy) yenzelwe abo bathanda ukuqhuba ngokugqithiseleyo. Ezi zihlangu zineeplastiki.
Imodeli ethandwa kakhulu yibhodi yaseNano eyenziwe ngokukhethekileyo, eqhotyoshelweyo ngoncedo lwe-teknoloji ekhethekileyo ye-Sole-Link yobunini-mveliso kwi-solely ye-Heelys boot. Esi sixhobo siqinisekisiwe ukuba sinike ukubonakala okubukhali. Ngendlela, umzimba webhodi yenziwe ngokukhawuleza kwaye ichanekile kunye ne-co-polyester.
Indlela yokukhwela ngezihlangu ngevili?
Ngoko, simi kwindawo ephantsi. Sibambe imilenze yethu komnye nomnye. Sizama ukugcina imali. Siphendulwa nge-sock evela emhlabeni. Isiko sobutyebi sihanjiswa kwisithende. Zilungiselele ukuba kuya kukuthatha malunga nemizuzu engama-30 ukuqonda izibhoto ezinjalo ezimangalisayo.
Ugqoke phantsi phantsi ngamagxa avulekileyo
Ugqoke kwi-guipure kunye ne-satin
Indlela yokuphatha izihlangu zesikhumba se patent?
Ugqoke nge-neckline ngemuva
Iipatheni zeekhati zabasetyhini abaneentloko ezininzi
Yintoni enokugqoka i-gaiters ebusika?
Iinqwelo zeentlanzi kwi-oven
Ukutya kwi-thyroid autoimmune thyroiditis
Izixhobo zomlilo zombane
Ukutya kwekhalori ephantsi
I-Blue akara - iingcebiso zokunyamekela iintlanzi ezingenakuthobeka
I-Recipe yekheke yesibindi kwi-fover yengulube
Iimodeli zeengubo zezimvu zika-2015-2016
Unokuhlamba njani intaka?
Indlela yokukhohlisa umntu?
Iiveki ezingama-35 zesisu - isisindo somntwana
Gcoba ngesafire - ukhetho lwezithombe zeempahla ezintle nezangaphambili kunye namafiresare
Iiveki ezili-10 zokukhulelwa - kwenzeka ntoni?
Kunokuba i-hematogen iluncedo?
Indlela yokuhlamba i-oven yamanqatha endala?
Uhlobo lweDonnick - izakhiwo ezincedo
Bat Tattoo - Ixabiso
I-Microflora yesigidi somlomo
Umxokelelwano owenziwe ngobuhla kunye nobuhlalu